Sudaan Maal Keessa Jirti?
Magaalaa galma-mootummaa Sudaan – Kaartuum keessatti poolisoonni biyyattii uummata akka mootummaan siivilii hundeessamu gaafachuuf hiriiretti gaazii imimmaansisu dhukaasan.
Waldaan ogeessootaa Sudaan akka jedhutti hanga waraanni aangoo sivilootatti kennuutti dullii diddaa sivilootaa itti fufa jedha.
Dilbata kaleessaaa mormii gaggeessaa kanneen turan keessaa 4 ajjefamuun gabaafamee jira.
dhagaan Kaartuum gama kaabaa konyaa Bhari keessatti hiriirtonni damee mukaa, Gommaa fi dhagaan daandiwwan cufan. Magaalaalee gandeen adda addaa keessatti Gabaa fi Suqileen cufamanii jiru.Daandilee cufuun kunis namoonni hojii akka hin deemneef yoo ta’u Kunis dhiibbaa gochuuf ta’a jedha.
Wiixata darbee humnootiin nageenyaa mooraa mormitootaa eega haleelanii booda Mormitoonnii fi kannee hiriira ba’aa jiran namnii akka hojii hin seenne ittisaa jiru.
Wiixata darbee waraanni tarkaanfii eega fudhatee as namoonni 113 ajjefamuu Doktoroonni mormii gaggeeffamutti dhiyeenya qaban ibsanii jiru.Ministriin eegumsa fayyaa garu lakkofsii namoota du’anii 61 jedha.Hogganoota warra mormii dhagesisanii fi waraana giddutti/ mariin
Mormii taa’uun gaggeeffamaa ture kan Wiixata darbee irratti tarkaanfii fudhatame kanneen argan akka jedhanti humnootii yeroo hatattamaa kan dur garee jaanjaawid turaniin kan deggeramee ture.Gareen Jaanjaawidbara 2003 fi 2004 giddutti/ dararaa Kutaa Daarfur keessatti dhaqqabeef/himatamanii jiran.